Lionel Messi Oo Kulanka Adag Ee Villarreal Isha Ku Haya Laba Rekoodh Oo Gool Dhalinta Iyo Guulaha Horyaalka La Liga ah
Thursday December 07, 2017 - 22:39:47 in Wararka by Editor Caynaba News
LONDON(cyn)Xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ugu dhawaan goolka kasta oo uu dhaliyaa inta badan keenaa in
rekoodho cusub uu ku dhigo ama uu kooxdiisa taariikho kaga abuuro wuxuuna markale kulanka adag ee Villarreal isha ku hayaa in uu gaadho laba rekoodh horyaalka La Liga Ah.
Barcelona ayaa u safraysa garoonka dhibta badan ee Estadio de la Cermámica halkaas oo ay marti ugu noqon doonto kooxda Villarreal iyada oo waliba kooxda Valverde barbaro soo gashay labadii kulan ee ugu danbeeyay inkasta oo ay sabab uga dhigeen qaladaad uu garsoorku ka galay Lionel Messi iyo Luis Suarez oo goolal sharci noqon lahaa laga diiday.
Lionel messi ayaa safan doona kulankiisii 606 aad ee waayihiisa Barcelona wuxuuna doonayaa in uu dhaliyo goolkiisii 150 aad ee kulamada maalinta axada ah la ciyaaro. Messi ayaa haddaba soo dhaliyay 149 gool oo horyaalka La Liga ah ee kulamada maalinta axada ah la ciyaaro, wuxuuna gool kaliya oo uu dhaliyaa sabab u noqon karaa in hal maalin oo axada ah uu La Liga ka dhaliyo 150 gool.
Lionel Messi ayaa haddaba 189 gool oo horyaalka La Liga ah soo dhaliyay maalinta sabtida ah laakiin haddii uu gool ka dhaliyo Villarreal wuxuuna 150 goolka dhagi doonaa goolashiisa maalinta axada ee La Liga. Goolkii ugu horeeyay ee uu Messi dhaliyay maalin axad ah ee horyaalka La liga ayaa ahaa May 1,2005 kii makraas oo ay Barcelona 2-0 ku garaacday kooxda Albacete waana goolkii uu Ronaldinho caawintiisa sameeyay ee caanka ahaa.
Goolkiisii 100 aad ee maalinta axada uu La Pulga ka dhaliyay horyaalka la Liga ahaa ayaa goolkii uu Real Madrid ka dhaliyay March 23, 2014 markaas oo ay Barca 4-3 guul ku gaadhay wuxuuna qayb ka ahaa saddexleydii uu Messi ku dhaliyay Santiago BernabeuMaalmaha Usbuuca Ee Uu Lionel Messi goolasha ugu Badan Ka Soo Dhaliyay La Liga:
Isniin: 4 gool oo horyaalka La Liga ah.
Talaaada: 65 gool oo horyaalka La Liga ah.
Arbaca: 105 gool oo horyaalka La Liga ah.
Khamiis: 10 gool oo horyaalka La Liga ah.
Jimce: 2 gool oo horyaalka La Liga ah.
Sabti 189 gool oo horyaalka La Liga ah.
Axad: 149 gool oo horyaalka La Liga ah.